Miyay tahay in Xubnaha UNWTO ay tikidh u gooyaan Marrakesh hadda? Maya !!!
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Miyay tahay in Xubnaha UNWTO ay tikidh u gooyaan Marrakesh hadda? Maya !!!
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Shirka Warka Warshadaha • Moroko News • News • Wararka Spain • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
UNWTO iyo wasiirrada dalxiiska oo ka kala socda in ka badan 100 dal ayaa ku guda jira iibinta tigidhada si ay uga qaybgalaan Shirweynaha 24aad ee Ururka Dalxiiska Adduunka.
Sida laga soo xigtay xogta laga helay gudaha maamulka UNWTO wax tikidh ah looma baahna, marka laga reebo kombiyuutar wanaagsan iyo isku xirka internetka si aad uga qaybgasho dhacdada.
The Shirweynaha 24aad ee Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) ayaa la qorsheeyay inay ka dhacdo 30 -ka November ilaa 3 -da December magaalada Marakesh, Morocco.
eTurboNews ayaa saadaaliyay dib -u -dhigista Golaha Guud bisha July. Horaantii bishaan saadaashan ayaa noqotay mid dhab ah markii UNWTO ay si rasmi ah u samaysay taariikhaha cusub.
Ilo wareedyo ku dhex jira Ururka Dalxiiska Adduunka ayaa hadda si maldahan u muujinaya qorshe ka duwan kan laga yaabo inuu sameeyo.
Xitaa socdaalayaasha si buuxda loo tallaalo ee Morocco waxaa ka digaya dowladaha, oo ay kujirto Mareykanka inay ka fogaadaan u safridda Boqortooyada Marooko sababtuna tahay kororka kala duwanaanshaha Delta ee aadka u faafa ee Coronavirus.
Nidaamka caafimaad ee Marooko uma qalabeysan yahay in lagu daweeyo koror dheeraad ah oo ku saabsan kiisaska COVID-19, iyo qabashada Golaha Guud ee Dalkan Waqooyiga Afrika ayaa laga yaabaa inay noqoto ergo halis ah oo ka socota ku dhawaad ​​160 dal oo aan rabin inay qaataan.
Diyaargarowga rasmiga ah ee dhacdadan muhiimka ah ayaa wali socota, laakiin ilo xog ogaal ah oo ku sugan xarunta UNWTO ee Madrid ayaa ka dhawaajiyay eTurboNews in u diyaargarowga Shirweynaha Guud ee ugu horeeya la diyaariyay waqtigan.
Waxaa la filan karaa in isbeddelka noocaas ah aan lagu dhawaaqin illaa daqiiqadda ugu dambeysa waxaana dhici karta inay jirto sabab xeeladeysan oo aad u daneyneysa xoghayaha guud ee UNWTO eTurboNews ayaa hadda baaraya.
Sida had iyo jeer, eTurboNews wuxuu isku dayay inuu xaqiijin toos ah uga helo UNWTO.
Nasiib darro, Maareeyaha Isgaarsiinta UNWTO Marcelo Risi wuxuu dhibane u noqday urur ay maamulaan cabsi, hanjabaad, iyo cadaadis, iyo in si xor ah loola xiriiro waa qeyb ka mid ah agaasimaha isgaarsiinta lama oggola in la sameeyo.